Hery - Tsiky dia ampy | Politika |
2015-05-22 @ 10:44 in Politika
Oviana no niova ho mena ny lokon'ny TIM? Sa efa hatramin'izay? Raha izaho ry zareo dia ilay loko maitso tamin'ny loko TIM (manga sy maitso) taloha no nalaina.
Sary nalaina tao amin'ny pejin'i Guy Rivo
Raha tsy nisy coup d'Ã©tat
Valin'ny fanontaniana momba an-dRavalo sy ny didy jadony
2009-02-27 @ 09:25 in Politika
Voalohany indrindra aloha dia averimberiko ihany ny fireha-kevitro. Tsy mpanohana be fahatany an-dRavalomanana aho. Ny antony mbola anekeko an'izao fitondrana izao dia satria tsy mbola misy foana mpanohitra matotra ho afaka hisolo an-dRavalo na dia noeritreretina ny ho teteza-mita ho amin'ny fitondrana tsaratsara kokoa fotsiny aza Ravalo tamin'ny 2002. Tamin'ny fifidianana 2007 iny dia nijery aho raha misy olona vaovao hitondra saingy toa mbola tian'ny olona loatra Ravalo dia miandry amin'ny 2012 indray izany. Ho hita eo raha misy hafa tsaratsara kokoa indray. (tohiny)
Malagasy iza no maty teny Antaninarenina?
2009-02-07 @ 15:43 in Politika
Tamin'ny taona 1991, raha nanafika teny Mavoloha izahay, dia tsy nampoizinay hoe hitifitra Ratsiraka. Tsy mbola nisy hoe filoham-pirenena noeritreretinay hoe hitifitra vahoaka izany. Fa tamin'iny vao fantatray hoe hay misy an'izany zone rouge izany, niantsoantso izahay hoe mpamono olona i Ratsiraka kanefa tsy nampiverina ireo maty akory izany. Nanomboka tamin'izay dia nivoadivoady izay nilahatra teny hoe hofatifaty foana fa aleo mitady fika hafa. Ratsiraka hatramin'izao tsy naninona fa mbola misonanina any Frantsa. (tohiny)
Na ho avy aza i Johnny Hallyday
2009-02-06 @ 09:24 in Politika
(Ny fiainana mandeha ihany) Toa hoe ho avy any Madagasikara hono i Rossy? Hanimba carrière any indray dia rehefa halan'ny olona vao hoe "Mbola tsy mety tafody foana leisy aho" :-) (tohiny)